I-china i-3 oz solder imask yokufaka iplagi ye-ENEPIG abenzi bebhodi yobhedu enzima kunye nabathengisi | Kangna
I-3 oz solder mask efaka i-ENEPIG kwibhodi yobhedu enzima
Ii-PCB zeCopper ezinzima zisetyenziswa kakhulu kwiinkqubo zeMbane ze-Elektroniki kunye nePower apho kukho imfuneko yangoku ephezulu okanye ukubakho kokudubula ngokukhawuleza kwempazamo yangoku. Ubunzima bobhedu obonyukayo bunokujika ibhodi ye-PCB ebuthathaka ibe yindawo eqinileyo, ethembekileyo, kunye nehlala ixesha elide kwaye igates imfuno yokongezwa kweendleko kunye nezinto ezinamandla ezinje ngezixhobo zokufudumeza, iifeni, njl.
Akukho nkcazo isemgangathweni ye-PCB enzima yeCopper, ngesiqhelo ukuba ubukhulu bobhedu bungaphezulu kwe-30z.
Ibhodi ichazwa njengebhodi yobhedu engqindilili.
Ukusebenza kwebhodi yobhedu eshinyeneyo: ibhodi yobhedu eshinyeneyo inentsebenzo yolwandiso olungcono, ayikhawulelwanga bubushushu bokuqhubekeka, indawo yokunyibilika ephezulu inokusetyenziselwa ukuvuthuza ioksijini, iqondo lobushushu eliphantsi alikho brittle kunye nezinye izinto ezinyibilikisayo ezinyibilikisayo, kunye nothintelo lomlilo. Izinto ezinokutsha. Amacwecwe obhedu enza into eyomeleleyo, engenatyhefu, yokutyabeka, kunye neemeko zemozulu ezonakalisayo.
Izinto eziluncedo zenziwe ngeplani eshinyeneyo yobhedu: Itafile yobhedu eshinyeneyo isetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo ezahlukeneyo zasekhaya, iimveliso zetekhnoloji ephezulu, emkhosini, kwezonyango nakwezinye izixhobo ze-elektroniki. Ukusetyenziswa kwetafile yobhedu eshinyeneyo kuyolula ixesha elide lenkonzo yebhodi yesekethe engoyena ndoqo weemveliso zezixhobo zombane ,, kwaye kwangaxeshanye, kuluncedo olukhulu ukwenza lula umthamo wezixhobo ze-elektroniki
IiPCB zoBhedu obunzima
Nakuphi na ukuveliswa kwe-PCB, nokuba kungakucala okanye kumacala amabini kwenziwa ngamachaphaza obhedu okususa ubuchwephesha obungafunekiyo kunye neendlela zokufaka ukongeza ubukhulu kwiiplanethi, iipads, kunye nemikhondo kunye nePlated-Through-hole (PTH). Ukwenza i-PCB zeCopper esindayo kuyafana nokwakhiwa kwee-PCB ze-FR-4 eziqhelekileyo kodwa zifuna iindlela ezikhethekileyo zokutsala kunye nokwenza i-electroplating ezonyusa ubukhulu bebhodi yomphezulu ngaphandle kokutshintsha ubalo lwamaleko. Iibhodi ezi-Surface ezityebileyo ziyakwazi ukuphatha iintsimbi zobhedu ezongeziweyo ngenxa yeendlela ezizodwa ezibandakanya isantya esiphezulu, ukuzingca, nolwahluko okanye ukuphambuka.
Indlela eqhelekileyo yokutsala ayisebenzi kwiiPCB zeSinyithi esiSindayo kwaye idala imigca engalinganiyo kunye nemida engaphezulu. Sisebenzisa ubuchule beplating ekuqhubekeni ukufumana imigca ethe tye kunye nemiphetho yomda ogqibeleleyo ngokufumana ngaphantsi. Inkqubo yethu yesingxobo esongezelelekileyo inciphisa ukunganyangeki komkhondo wobhedu ngokwenza oko kuphuculise amandla okuqhuba ubushushu kunye nokunyamezelana noxinzelelo lobushushu.
Ukuncitshiswa kokuchasana nobushushu kuphucula amandla okusasaza ubushushu besekethe yakho ngokuhambisa ubushushu, ukuqhuba kunye nemitha. I-Fabricators yethu ikwajolise ekuqiniseni iindonga ze-PTH ezisebenzela izibonelelo ezininzi ngokunciphisa ukubalwa kwamanqanaba kunye nokunciphisa ukunganyanzelekanga, ukuprinta kweenyawo, kunye neendleko zokuvelisa ngokubanzi. Sithatha ikratshi ngokuba yenye yezona zinto zifikelelekayo kunye nomgangatho wee-PCB ze-Heavy Copper abavelisi kwihlabathi liphela.
Nangona kunjalo, ezi PCB zibandakanya iindleko eziphezulu kunee-PCB eziqhelekileyo njengoko inkqubo yokudibanisa inamandla kwaye inzima. Izixa ezikhulu zeCopper kufuneka zisuswe ngexesha lenkqubo yokuHanjiswa. Inkqubo yokufaka i-lamination ifuna ukusetyenziswa kwe-Prepreg enomxholo we-resin omkhulu wokugcwalisa izithuba phakathi komkhondo wobhedu. Ke, iindleko zokwenza imveliso ziphezulu kunee-PCB eziqhelekileyo. Nangona kunjalo, sisebenzisa indibaniselwano yendlela yeBlue Bar kunye nendlela ye-Copper Embedded yokubonelela ngebhodi ephezulu ngexabiso elifanelekileyo.
Ukusetyenziswa kweePCB zeCopper Heavy
Senza kwaye sibonelela ngezi PCB apho kukho ukubakho rhoqo okanye ngesiquphe kokuchaphazeleka kobushushu obomeleleyo kunye nobushushu obongeziweyo. Amanqanaba agqithisileyo anele ukonakalisa i-PCB yesiqhelo kunye nokufowuna imfuneko yeCopper Heavy ekwahlisa ukubalwa kwamanqanaba, inikezele nge-impedance esezantsi, kwaye yenze ukuba i-footprint encinci kunye nokonga iindleko ezinkulu. Apha ngezantsi kukho iindawo ezithile kunye nokusetyenziswa kwee-PCB zePower Heavy ezisetyenziswayo:
• Iinkqubo zokuSasazwa kwaMandla
• Iimodyuli zesikhulisi soMbane
• Iibhokisi zeJunction yaMandla oMbane weeMoto
• Izixhobo zaMandla zeeNkqubo zeRadar
• Izixhobo zokuWelda
• Iinkqubo zeHVAC
Izicelo zaMandla eNyukliya
Ukukhuselwa kunye nokuThunyelwa koMthwalo oMninzi
• Iinkqubo zoMbane kaloliwe
• Abavelisi bePhaneli yelanga
Kwiminyaka yakutshanje, ibango lezi PCB lenyukile kwizithuthi, ezomkhosi, ezekhompyuter kunye nolawulo lwezentengiso. I-Kangna inamava amashumi eminyaka ekuveliseni ii-PCB ze-Copper eziMandla ezikumgangatho ophezulu. Iinjineli zethu ezinezakhono zizinikele ekuhlangabezeni imigangatho ephezulu kwaye zenze iiBhodi zePremiyamu ezihlangabezana nokulindeleka kokusebenza kunye neenjongo zenzuzo. Siyayiqonda into yokuba uyilo lwe-Heavy Copper PCB luza nobunzima obongezelelweyo kwaye ngenxa yoko, sijongana nayo yonke imibuzo kunye neenkxalabo ngaphambi kokuqhubeka nemveliso.
Yintoni esenza ukuba sikhetheke kukuba iibhodi zethu eziphuhlisiweyo zidlula kwimijikelo eyahlukeneyo yokujonga umgangatho ngaphambi kokuba kusiwe kubathengi bethu. Isebe lethu lolawulo lomgangatho ongaphakathi endlwini liqinisekisa umgangatho wee-PCB zeCopper Heavy kwaye liqinisekisa ukuba imveliso yokugqibela ihlangabezana nomgangatho ogqwesileyo ngobuncinci ukuya kumngcipheko wokungaphumeleli kwesekethe.
Egqithileyo Umngxuma wokufaka umngxunya kwi-HDI yesilivere yokuntywila ngesilivere
Okulandelayo: ii-multilayer eziPhakamileyo zeBhodi ye-TG ngokuntywiliselwa kwegolide kwimodem